सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, कारोबार रकम साढे २१ अर्ब माथि
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको सीमा अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ तोकिएपछि साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा गिरावट आएको छ। यद्यपि आज बजारमा उच्च कारोबारको कीर्तिमान बनेको छ। सेयर बजारमा आजको दिन हालसम्मकै उच्च कारोबार भएको छ। यो दिन साढे २१ अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। आज नेप्सेमा सूचीकृतमध्ये २२२ कम्पनीका कुल ३ करोड ५५...
सेबोनको 'अपरिपक्व कदम'ले लगानीकर्ताको अर्बौ स्वाहा, ५१ कम्पनीमध्ये कसले कति गुमाए ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले हचुवाको भरमा अनुसन्धानको नाममा गत मंगलबार ‘जोखिमपूर्ण’ भन्दै ५१ वटा कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेपछि सेयर बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ। गत मंगलबार ३०२२ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक लगातार ३ दिन घटेर आज आइतबार २९०५ को विन्दुमा झरेको छ। यो ३ दिनको अवधिमा परिसूचक ११७ अंकले घटिसकेको छ...
आज सेयर बजार खुल्छ कि खुल्दैन ?
काठमाण्डौ । सेयर बजार आज बुधबार बन्द हुने भएको छ। आज २५६५ औँ बुद्धजयन्ती परेको छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बुद्धजयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा रहेको आज सेयर बजार बन्द रहने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जनाएको छ। बजार अब बिहीबार खुल्नेछ। लगातार बढिरहेको बजारमा हिजो मंगलबार सामान्य करेक्सन आएको थियो। हिजो बजार ६.५०...
नेप्सेलाई इन्ट्रा डे ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्नेसहित पुँजीबजार फोरमले दियो यस्ता सुझाव
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई इन्ट्रा डे ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्नेसहित विभिन्न ३० बुँदे सुझाव दिएको छ। फोरमले मंगलबार नेप्सेका प्रतिनिधिलाई भेट गरी ३० बुँदे सुझाव दिएको हो। फोरमले अहिले माहौलमा नेप्सेले इन्ट्रा डे ट्रेडिङ सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव...
एक वर्षमै नेप्से झन्डै डबल, बजार पुँजीकरण पनि ९८.३%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय पुँजी बजारमा ह्वात्तै आकर्षण बढेको छ। जसका कारण परिसूचकसँगै बजार पुँजी झन्डै सतप्रतिशत बढोत्तरी भएको छ। अर्थ मन्त्रालय जारी गरेको माघ महिनाको आर्थिक बुलेटिनअनुसार नेप्से परिसूचक झन्डै दोब्बरको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका माघ मसान्तसम्म परिसूचक २५२६.९२ को विन्दुसम्म पुगेको बुलेटिनमा उल्लेख...
काठमाण्डौ । यो साता सेयर बजार ३ दिनमात्र खुला हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार यो साता सार्वजनिक बिदा २ दिन परेकाले बजार ३ दिनमात्र खुल्ने भएको हो। सातामा शुक्रबार र शनिबारबाहेक अन्य दिन सेयर बजार खुल्ने भए पनि यसपालि सोमबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकोले ३ दिनमात्र बजार खुल्ने भएको छ। यो साता आज सोमबार नारी दिवस र...
नेप्सेद्वारा थप ४ कम्पनीको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज आइतबार थप चार कम्पनीको धितोपत्र कारोबार फुकुवा गरेको छ। नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा पेस नगरेको भन्दै गत माघ २६ बाट रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, कालिका लघुवित्त, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको धितोपत्र...
नेप्सेले गर्यो राष्ट्रिय बीमा र विशाल बजार कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का, यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचीकृत दुई कम्पनीको धितोपत्र कारोबार दोस्रो बजारमा रोक्का गरेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको धितोपत्र कारोबार गर्ने निर्णय नेप्सेले आज आइतबार लिएको हो। आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण समयमा पेस नगरेका कारण धितोपत्र कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेले...
एनसीसी बैंकले नेप्सेमा पठायो पत्र, यस्ता छन् जबाफ
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणको जबाफ पठाएको छ। नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा एकाएक उच्च खरिद चाप देखिएकोले मूल्यमा असर गर्ने कुनै सूचना वा निर्णय गरेको भएमा सोको जबाफ पठाउन भन्दै नेप्सेले हिजो आइतबार एनसीसी बैंकलाई पत्र पठाएको थियो सोही पत्रको जबाफ आज सोमबार एनसीसी...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। नेप्सेमा गत माघ १० गतेसम्म नियमित तथा सामान्य उतारचढावमै एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार भइरहेकोमा अचानक आज कारोबार प्रणालीमा उच्च खरिदचाप देखिएकोले मूल्यमा असर गर्ने कुनै सूचना तथा निर्णय गरेको भएमा त्यससम्बन्धी जानकारी पठाउन...
काठमाण्डौ । लामो रस्साकस्सीपछि धितोपत्र बजारमा आएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) मा एकपछि अर्को समस्या देखा पर्दा लगानीकर्ताहरु हैरान भएका छन्। टीएमएस कहिले खुल्दै नखुल्ने, खुलिहाले पनि राम्रोसँग काम नगर्ने, अर्डर म्याच नहुनेजस्ता समस्या हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन्। केही समयअघि टीएमएसमा देखिएका समस्याका...
धितोपत्र बोर्डको ठाडो हस्तक्षेपपछि नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन अनिश्चित
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ठाडो हस्तक्षेपका कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)द्वारा निर्मित आईटी पोलिसीको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागू नहुने भएको छ। धितोपत्र बोर्डको हस्तक्षेपले अब यो कार्यविधि कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको हो। धितोपत्र बोर्डको नेप्सेले लामो समयको कसरतपछि लागू गर्न लागेको तथ्यांग �...
नेप्सेमा प्रभु लाइफको सेयर सूचीकृत, आइतबारबाट कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा भर्खरै आईपीओ जारी गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर शुक्रबार सूचीकृत भएको छ। यो कम्पनीको प्रतिसेयर अंकित तथा चुक्तामूल्य १०० रुपैयाँ कायम भएको २ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो। नेप्से र प्रभु लाइफबीच यस विषयमा सूचीकरण सम्झौता पनि आज सम्पन्न भएको छ। नेप्सेमा सूचीकरणसँगै अब...
बम्पर लाभांश पारित गर्न नेप्सेले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कुल ५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा नेप्सेको चुक्तापुँजी ५० करोडको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने बोनस सेयर र ३० प्रतिशतले हुन आउने १५ करोड रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश (लाभांश करसहित) रहेका...